Madaxweynaha Musharaxa ah Xasan Sheekh muxuu ka sheegay Kismaayo? -VIDEO
Tuesday December 06, 2016 - 08:15:29 in Wararka by haykal haykal
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaaliga ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta gaarey magaalada Kismaayo, halkaas oo si weyn loogu soo dhaweeyey.
Madaxweynaha waxaa garoonka diyaaradaha ee Kismaayo ku soo dhaweeyey Madaxweynaha maamul goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaan iyo madax ka tirsan maamulkaas, waxaana uu salaan sharaf ka qaatey qaar kamid ah ciidanka Jubaland.
Madaxweynaha oo saxaafadda la hadley ayaa sheegay in uu Kismaayo u yimid laba arrimood, kan kowaad in uu yahay Musharax 2016-2020 oo uu doonaayo in mar kale la doorto qodobka labaadna uu yahay in uu maamulka Jubaland ugu hambalyeeyo in ay noqdeen kuwii ugu horeeyey ee dhamaystira doorashada labada aqal ee Soomaaliya.
Madaxweynaha ayaa safarkiisa soo dedejiyey Kismaayo, waxaana uu jawaab uga dhigayaa booqasho rayslawasare Cumar Sharmaarke ku tegey Kismaayo oo uu sheegay in dalkan Soomaaliya u baahan yahay is-beddel Madaxweyne, ama Madaxweyne garan kara shaqada Rayusalwasaaraha oo aan wakhtigiisa ku dhameyn loolan awoodeed.
Habeenka caawa ah ayaa Xasan Sheekh kulan la qaadanayaa Xildhibaanada federaalka loo dortey oo tiradoodu ka badan tahay 50 Xildhibaan, waxaana uu weydiisan doonaana codkooda.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dalka ka soo talinaayey afartii sano ee la soo dhaawey, waxaana uu dedaal xoogan ugu jiraa in mar kale la doorto iyada oo si weyn loogu kala qaybsan yahay dhaxalkiisi iyo waxa uu ka qabtey ballan qaadkiisi uu ula baxay lixda tiir.
Xiliga doorashada Madaxweynaha ayaan si rasmi ah loo aqoon, waxaana loo badinayaa in ay gaari karto bilowga sanadka danbe ee 2017.